FANISANA ANDRO | Madatopinfo
FANISANA ANDRO: Tsy hisy ny andro tsy hiasàna nefa handraisan-karama amin’ity 2017 ity raha tsy hisy fifidianana.
14 andro no voatondro eo anivon’ny fanisana andro malagasy mandritra ity taona 2017 ity, raha araka ny kalandrie gregôrianina fampiasa sy manan-kery eto amin’ny tany sy ny firenentsika. Miisa 9 kosa ireo andro fety sy tsy iasàna eto Madagasikara ary eken’ny fitondram-panjakàna Malagasy. Ka amin’ity dia 365 andro ihany ny taona iray raha toa ka 366 andro ny 2016 nivalona iny.
Nitontona Alahady ny 01 Janoary tamin’ity. Efa andro tsy fiasàna rahateo io. Andro Alarobia kosa indray ny fahatsiarovana ny tsingerin-taonan’ny Tolon’ny Maherifom-pirenena, ho Fanafaham-pirenena izay feno 70 taona katroka amin’ity, dia faha-29 Marsa izany. Ny Alatsinain’ny Paska ihany koa dia andro tsy fiasàna ny faha-16 Avrily 2017. Ny ampitson’ny fankalazàna ny Paska 2017 izay andro Alahady io. Tsy misy valaka amin’io koa ny Alatsinain’ny Pentekôsta, ny faha- 05 Jona 2017, izay ampitson’ny Alahady Pentekôsta. Aorian’ny Alatsinin’ny Paska dia mianjera andro Alatsiniany ihany koa ny fetin’ny Asa izay andro tsy iasàna ihany koa. Toy ny mahazatra ny fanamarihana ny andro niakarana dia Alakamisy mandrakariva ka ny faha-25 Mey indray izy amin’ity. Tsy iadiana varotra fa fety efa mahazatra ny malagasy na dia kolontsaina vahiny aza ny fanamarihana manokana ny fetin’ny Reny sy ny an’ny Ray. Ny Alahady faha-28 Mey ho an’ireo kitapo nifonosana mbola velona raha toa ka ny faha-18 Jona kosa ho an’ireo Ray rehetra mbola ao anatin’ny fahavelomany. Tsapan’ny maro anefa fa somary latsa-danja kely noho ny an’ny reny ny an’ireo ray hatreto. Andro Alatsinainy faha-26 Jona amin’ity ny fanamarihana ny tsingerin-taona niverenan’ny Fahaleovan-tenam-pirenena Malagasy. Tsy misy fety sy andro tsy fiasàna intsony raha tsy ny Talata faha-15 Aogositra indray. Ny manaraka eo dia ny fetin’ny olo-masina, amin’ny Alarobia faha-01 Nôvambra 2017. Ny Krismasy na Noely 2017 no mamarana ireo andro fety sy tsy fiasàna, dia amin’ny Alatsinainy faha-25 Desambra izany.
Ny faha-08 Marsa andron’ny Vehivavy amin’ity dia milatsaka Alarobia. Ka matetika no mahazo tapak’andro tsy iasàna ireo Andriambavilanitra matetika na mety ho iray andro mihitsy aza arakaraka ny toeram-piasàna.
Raha toa moa ka misy antony lehibe sy mankadiry tsy hiasàna dia anjaran’ny fitondram-panjakàna mahefa irery ihany ny mamoaka ireo didim-panjakàna mametra izany.